कलको जवाफ दिन, लड्न, युद्ध जित्नको लागि सधैं तयार रहनुहोस् --- Goalong घरेलु ब्रान्ड बिक्री टोली-कम्पनी समाचार-Goalong रक्सी (समूह)
कललाई जवाफ दिन, लड्न, युद्ध जित्नको लागि सधैं तयार रहनुहोस्--- Goalong घरेलु ब्रान्ड बिक्री टोलीलाई
कम्पनीको विकासको आवश्यकताहरू पूरा गर्न, बिक्री टोलीको एकतामा सुधार गर्नुहोस्। Goalong समूहले चीन-अष्ट्रेलिया नानिङ राष्ट्रिय रक्षा थीम पार्कमा दुई दिने सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न घरेलु ब्रान्ड बिक्री व्यक्तिहरूलाई आयोजना गर्यो। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक सीपहरूलाई टेम्पर गर्नु र व्यापक गुणस्तर सुधार गर्न, टोली भावना खेती गर्नु हो। टोलीको प्रत्येक सदस्यलाई कार्यमा दक्षता सुधार गर्न दिनुहोस्। सैन्य प्रशिक्षणमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिले कडा आवश्यकताहरू र प्रशिक्षणको पालना गर्दछ, कठिनाइबाट नडराउने भावनालाई पालन गर्दछ। यस प्रशिक्षणको माध्यमबाट, हाम्रो बिक्री टोलीले निश्चित सैन्य कौशलको प्रारम्भिक निपुणताको आधारमा सामूहिकता स्थापना गर्दछ र सम्पूर्ण टोलीको एकता सुधार गर्दछ।
सबै कार्यले आज्ञा पालन गर्छ, र कोही पनि पछि पर्न सक्दैन। प्रशिक्षकहरूको सावधानीपूर्वक कोच अन्तर्गत, Goalong समूह बिक्रीले एक पछि अर्को कठोर प्रशिक्षण कार्य पूरा गर्यो। यस गतिविधिले कर्मचारीहरूको इच्छाशक्ति र लगनशीलताको अभ्यास गर्दछ, र संगठनात्मक अनुशासनको कर्मचारीहरूको अवधारणालाई बलियो बनाउँछ। सबैले गहिरो रूपमा सैन्य जीवनको आनन्द र कठिनाइहरू महसुस गरे, सैन्य प्रशिक्षणको महत्त्व महसुस गरे र ब्वाँसो बिक्री टोलीलाई प्रशिक्षण दिने लक्ष्य हासिल गरे।
यस गतिविधि मार्फत, Goalong समूहका बिक्री सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो भविष्यको काममा सैन्य तालिमको भावनालाई जोडदार रूपमा अगाडि बढाउनेछन्, र सैन्य प्रशिक्षणमा खेती गरिएको संगठनात्मक अनुशासन र कडा परिश्रम गर्ने भावनालाई उनीहरूको दैनिक कार्यमा ल्याउनेछन्। सबैको निरन्तर प्रयासहरूद्वारा, Gaolang ब्रान्ड बिक्री टोलीलाई कडा, अनुशासित टोलीमा बनाइएको छ जसले नयाँ-नयाँ भावनाका साथ भविष्यका चुनौतीहरूको सामना गर्नेछ!
अघिल्लो: युरोपेली बजारमा चिनियाँ ह्विस्की औपचारिक प्रवेश !
अर्को: चिनियाँ व्हिस्की डिस्टिलरीहरू